ChiGerman, Germany Almanx Chatroom - GERMANX
Almanx Chat Space
1 2 3 4 5 ... 46 Enda pasi
Re: Almanx Chat Kamuri
« Reply #11: Kubvumbi 21, 2010, 03:30:30 pm »
Zvakanaka, hama yangu, ini ndaive ndega, Mwari kutanga uyezve iwe. Neminamato yako, zvisikwa zvako zvishoma nezvishoma zviri kubvisa matambudziko edu, dambudziko redu guru kubvisa chirwere chevisa ichi.
uri mudiwa wangu
« Reply #12: Kubvumbi 21, 2010, 03:34:14 pm »
Ndinovimba muchabvisa, inguva yangu yekunyorera vhiza 6 kana 8. Inguva yangu yekutambura.
SHOOT ZUVA ROKUMIRIRA RICHATORA CHEESE KAvha .........
« Reply #13: Kubvumbi 22, 2010 pa 08:41:45 am »
Mangwanani Akanaka Almanx
« Reply #14: Kubvumbi 22, 2010 pa 10:12:43 am »
Mangwanani akanaka shamwari, anga ari mangwanani tenda mwari
« Reply #15: Kubvumbi 22, 2010 pa 10:31:35 am »
Nzira yakanakisa yekurarama hupenyu kumuka mangwanani-ngwanani, kuti uwane zuva rose
« Reply #16: Kubvumbi 22, 2010 pa 11:56:16 am »
ewet, kunyanya kana vanhu vaenda kumusha kwavo ... vanomuka nekukurumidza sezvinobvira ... vorara pakati pousiku .... pachezvangu ndichafa ... ini handidi kutambisa nguva pfupi ndichirara
« Reply #17: Kubvumbi 23, 2010 pa 02:02:17 am »
« Reply #18: Kubvumbi 25, 2010 pa 12:48:58 am »
Manheru akanaka shamwari, vhiki yako iri kufamba sei? Ndinovimba zviri kufamba zvakanaka .. Ini zvakare ndakamanikidza mazuva angu akashushikana uye akasimba kwenguva yakareba nekushandisa yangu yechitatu zuva rezororo nerunako rweApril 23, uye ndinotenda Mwari zvaive zvakanaka zvishoma maererano nemweya.
« Reply #19: Kubvumbi 26, 2010 pa 09:16:16 am »
Mangwanani akanaka shamwari, ndinemi zvakare mushure memazuva matatu ekubva
« Reply #20: Kubvumbi 26, 2010, 04:12:03 pm »
: kuseka: rombo rakanaka, doro rinofara, kutaura kuti ndanonoka ...
« Reply #21: Kubvumbi 26, 2010, 04:49:22 pm »
chinyarara kutenda takagadzira zvinonaka, cheka keke, wakanonoka kukurukura Tiri kunze tii: D ...
1 2 3 4 5 ... 46 Enda kumusoro